Ololli Hogganoota fi Miseensota ABO irratti godhamaa jiru Qabsoo Oromoo fi Misensota Dhaabicha ni jabeessa malee hin laffisu. - Welcome to bilisummaa
bilisummaa October 16, 2016	Leave a comment
Diinni baroota dheeradhaf milijena itti dhangalasee karaa bitamtootaa fi gantota qabsoo kana dhabamsiisuu ijibataa ture.Haa tahu malee dhabichis tahe hogganoti qabsicha cichoo tahan abdii osoo hin kutanne qabsoo hidhatinnoo,Diplomasii siyasaa fi fincila uummataa walitti qindessuun waregama qaqqalii kaffalaa fi injifatnoo gurgguddaa galmeessaa turan fi jirus.
Yeroo dheeraa fi keessaa iyyuu ji’ota darban kana olollii fi roorroon ABO fi qabsa’ota bilisummaa oromoo irratti godhama jiru kana, hogganootii fi miseensoti dhabichaa hojii fi diina uummata oromoo fi oromiyaa irratti duula sanyii daguuggaa rawachaa jirutti qiyyafatanii ti malee kan akkasumatti callisanii ykn sodatanii bira kutan namatti fakkachuu hin qabu .
Yammuu ABOn diinni uummata oromoo humnaan weerare saamaa fi ajjessaa jiru kun humnan malee oromiyaa irraa hin buqqa’u jechuun diina misa’ela ,meshaa baroo fi SIA irraa gorsa argachuun maqaa goolessitootan ABO fi WBO irratti duula daangaa hin qabne gochaa ture gariin isanii iccitii dhabichaa gurgurachaa fi wayyanetti dabalamuuf kadhachaa bahan. Inni kaan yeroo dantaan bitameee diinaaf hojjetu garii ammoo beekas tahe osoo hin beekin diinaaf dalagaa turee fi jira . oromootni garii ganda ,amantii fi garee ilaalu malee warra diinaaf dalagu jala hiriiranii jiraachuu isanii hin argan” akkuma sangaan marga malee hallayyaa hin argine akkuma jedhan”.
Harra gaafa qabsoon kun wareegama ilmaan cunqurfaman bakka olanaa kana irra gahu warri kalessa diina jala eegee raasa turan samsonayitii fi karabatii isinii sirreffachaa bobokkisu jalqaban ,waltajjin hawwasaa iyyuu wal hankachuu jalqabe Gariis akka wal fakatuun garee funaannatee charterii ijarachuu jalqabe ”utuu bineensi hin du’in sakkinii qarachuu”ykn dura qurpheen foon haa taatu jedhan.
Qeerroon harra hundumtuu abba itti tahuuf fiigu kun kan salphatti ijaaramte miti
Hojii kun as gahuu fi ABO gatii gudda fi waregama lubbuu hedduu akka gaafate seenaaf dhiifna.Yeroo ABOn kana jalqabe Karaa paltalkii fi karaa garaa garaa itti kolfama ture .”Hin bari’u seetee manatti haddee jedhan
Dubbin kana miti ABOs tahe uummatni oromoo kan fedhu oromiyaan harka diina keessa baatee kan oromoo tahuu qofa male enyuutu abbaa itti taha kan jedhu kun waan nu cinqu tahuu hin qabu. Kanaaf kan kanaan dura Qeerroo eenyutu ijaree irratti hin cuinqamina jennef “foon lafa jirtu allattin muka irraa wal goolti” jedha oromoon yammuu makmaaku.
Namootni tokko tokko waan ABOn wareegama yeroo dheera fi gurgudda itti kaffale asiin gahe bishan itti naqxanii waan hin jirre as baasuu yaalu . Hoggantii fi miseensoti dhabicahas akkuman gubbatti kaase utuma arganii waan fardii dursaa jirru . Kanaan dura meerre beektoti oromoo ,meerre aktvistoti oromoo jedhee kan bo’e waamicha isiniif godhaa fi didhaa isinitti uumaa ture qabswotuma harra isin salphisuu yaaltani kanaa dha. Waan isin jala dhokate tokko yoo jiraate garuu garuu qabsawoti harra umurii isanii guutu qabsochatti fixanii asiin gahan kun dantaa saba isanii dursaniiti malee osoo dantaa isanii dursaniru tahe lafa isin harra geessan kan gahuu waan dadhaban jettanii yoo yaaddan ni dogoggortanii sirreffadhaa jenna
Mee yammuu jara kana salphisuu yaaltan kana yoo tokko kahee kanaan dura eessa turtee? harra eessaa as baate jedhe si gaafate deebii quubsaa qabdaa laata? Akka ati deebii itti hin qabne nutu si caalaa beeka qabswoti garuu akki itti yaadan kana miti namni tokko gaafuma galeef dammaqa ,gaafa dammaqe sabaaf taha jedhanii yaadu.Ni beekna osoo fincilli uummataa kunii fi sochin ABO kun of booda debi’e ammo akka fincan adalaa dhabamtu.
Kanaaf kanan sila anaa dhufu ,baga nagaan dhuftan jedhee yoon xiqqoon dhabbasen dubbadhe tahe iyyuu .Haa tahu malee baga nagaan of yaadattan gaafa jennu hogganootaa fi qabsawota warra jabaatee itti chichee hojjete qabsocha dandamachiise asiin gahe kana ammo irra ejjedhaa darbaaf isinii hayyamuu miti ,Ilmi abbaa tuffatu ,salphisu lafa yaade hin gahu jannata ille hin argatu akka amantii oromoo gurguddaa sadanuutti.
Walumaa gala warri ABO fi qabsawota xiqqessitanii OPDO tokko tokko warra dhiiga ilmaan oromoon harka dhiqachaa bahan jala fiigdan osoo irra of qusattanii gaarii dha yoo tahuu baate waan isin mudatu isinuu beektu. utubaan ABO fi qabsawota qabsoo kanatti cichanii sibiila waan taheef, keessaa iyyuu warri ABO irratti kashalabbota bittanii olola ofsisaa jirtan kun hedduu of qusadhaa. Garii haadha manaa wayyene waliin hojjechiisa dhaaban hogganna jedhee yammuu burraa karrayuu jedhus ni agarra.
Namooti kaan yammuu halli xiqqoo qabbanahu callisanii diina waliin lafa jala hariiroo isanii tolfachuun waan barbaadan godhu,qabsawota afaan fajjessuu fi dantaa isanii jala gulufu .gaafa sochiin WBO fi Fincilli uummata jabaatu ammoo gadi bahanii isin duukaa jirraa jechuun miIdiyaa irratti bahuun uummata oromoo afaan faajjessuu fi gowwomsuu yaalu ,kunis toobataa dullomaa dha ”yaa gantuu dabballe uummatini oromoo kuteera as irra illee” jette Maramen jannata nuuf haa boqottu malee.
Garii ammoo ofumaaf MQBO keessatti rakkina uumee gaafa milkahu dadhabu rakkoo mooraa keessa qabnu yeron furachu qabna jedhe gadi baha hinuma rakkatne fira koo Akkuma ”namni galanni nyaate hoomacha qaqqabata” jedhan jojonja’uu irra afaan ofii qabatanii yoo waan dandahan oromoof gumaachan hoo?
Kan biraan QBO kan argaa fi dhagahettii argatee as gahe OMN dhaan miti OMN fi warra isa hoggananu kan dhalche ABO fi SBO dha. Kanaf hogganoota OMN irraa olola diinaan jalqabame gantootan oofamaa jiru isan irras dhagahuun hedduu nu gaddisiise .Haa tahu malee OMN iyyu kan akka gad dhaabatu godhe irra hedduun miseensotuma ABO ti . maaliif kan ABO fi miseensota dhabichaa gaddisiisuun akka barbaachise naaf hin galu. ራጋ በይ ባሏት ምናዉ መገስጋሷ, ጣልፎ እንዳይ ዋድቋት ዬጋዛ ቃምሷ” jedhe Tafara Nagash dhiifama afaan warra isaan jala fiiganiin makmakuu koof (yaa soogidda yoo ofii jette minyaayi ykn dhakaa dha jedhan si gatuu) kan jedhus jira. Ka biraan lafa turree fi lafa dhufnee dagachuu hin qabnu,silaa illee waan hedduu dubbatnaa “ Haa taa’u jedhe jaldeessi dhakaa galagalchee”.Yoo iji keessan waan ABOn hojjetuu fi lola inni godhu hin argu tahe warri iji isanii arguu fi diinni lolame of irraa haa dubbatuu waan hin taane dubbattanii of hin xiqqeessinaa.
Walumaa gala toobtaan ABO fi miseensota isaa lamshesina jedhamee fiigamaa jiramu kun dulloomaa dha, kun ammoo akka misensoti dhabichaa iccitii isanii dhokfatanii dhimma qabsoo irratti jabaatanii hojjetan taasise malee hin laaffisne.Namni hamattuu fi goomattuu olladhaa qabu akka inni bitaa fi mirga isaa to’achaa deemu isa taasisa ykn ni jabeessa.
Gara dhumaa irratti yeroon amma kun yeroo itti tokko xiqqessanii tokko ol kaasan miti yeroo itti waan qaban gqabatanii diina oromoo fi oromiyaa dhabamsiisaa jiru kana irratti duulanii Bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa uummata oromoo miliyoonan dheebote itti agarsiisanii dha.
Abdii Borii Irraa.
Previous #OromoRevolution LABSII MUDDAMAA WAYYAANEEN BAAFTE LAAMSHESSUUF
Next Lammaa Magarsaa; Yayyii Erbee Hoolaa Uffate Moo “Quqamaadha”?. Baarentuu Gadaa Irraa